Ọkachamara Ọmịlị na Ọrịa, Spyware na Malware Security Guide
Malware (okwu maka mmemme na-arụ ọrụ) bụ ngwa a chọrọ iji banye ma ọ bụ merụọ PC na enweghị nkwenye gị. Malware gụnyere ikpuru, nje PC, Trojan stallions, spyware, scareware na nke ahụ bụ nanị ọnụ mmiri ice. Ọ nwere ike ịnwe na saịtị na ozi ma ọ bụ kpuchie ya na akwụkwọ na-ebudata.
Ụzọ kacha mma ị ga-esi zere mmetọ bụ ime ka ezigbo ndị iro na-echebe usoro ihe omume, mee ntanetị maka spyware, zere ịchọta njikọ email ma ọ bụ saịtị. Dị ka o nwere ike, ndị na-eme ihe nkiri bụ ndị aghụghọ: ugbu a, mgbe ahụ, a na-eji aghụghọ chekwaa ozi dịka ozi email site n'aka onye ọrụ maọbụ saịtị na-enye aka. N'ezie, ọbụna ndị na-akpachara anya na ndị na-eme weebụ ga-enwe ike ibute nje ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe e mesịrị - somatoline deodorant.
N'elu ohere ị na - eme, enwere ọtụtụ ihe mmemme ị ga - eji na - akwụ ụgwọ iji nweta gị iji wepụ ya. Igor Gamanenko, Njikwa Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , depụtara ụfọdụ n'okpuru.
Ị na-eme nchọgharị, ma na-eme ngwa ngwa, ezigbo nlele ihuenyo na-egosi ma hụ gị na enwere nsogbu na PC gị, dịka ọmụmaatụ, 'A ga-emerụ PC gị na ngwa spyware ngwa ngwa. A chọrọ ngwa ngwa ịchụpụ. Iji nyochaa, pịa 'Ee'. Ị maghị ma ọ bụ ezi maọbụ na ọ bụghị, nkea ka ị ga - amalite? Kpachara anya, nke a nwere ike ịbụ scareware.
Ọ na-enyocha ihuenyo ma na-ekpokọta data gbasara gị, PC gị na ihe ndị ị na-atụghị anya na-enweghị nkwenye gị - maka ọtụtụ akụkụ, iji kwalite nzube. Ọ pụkwara ịchọta data site na odide adreesị gị na ọbụna isiokwu gị.
Ngwa Malware nke nwere ike igbanwe onwe ya na ichekwa PC dị iche iche.
ỤLỌ ANTIVIRUS FREE
Mmemme ndị a na - esote na - agba ọsọ n'enweghị ihe ọhụhụ, na - echebe PC gị pụọ na mmetọ.
Usoro antivirus n'efu na-ejide n'aka spyware, onye iro na rootkit na nchebe onwe ya.
Ọ BỤ Ọ BỤ
Iguzogide Nchọpụta Ọrịa na-esi na Grisoft nke na-eme ka ọta kpuchie PC site na ibute ọrịa nchekwa data na nchekwa.
Mkpa nchekwa Microsoft
Ọ na-enye nchebe na-aga n'ihu na kọmputa gị nke na-egbochi ọrịa, spyware, na ngwa ngwa dị iche iche.
Mee ebe dị nchebe na PC gị maka ntanetị weebụ zuru oke na ngwa ngwa a. Nke a bụ ngwá ọrụ pụrụ iche maka ndị ahịa nwekwuo ọganihu.
Nchebe dị iche iche
Iji malite, jide n'aka na ị na-ewebata usoro mmemme kachasị ọhụrụ nke na-eme ka usoro ọrụ gị dị ọhụrụ. Ndị a na-ejikarị mmelite nchedo na mmesi obi ike na-emetụ aka iji hụ na ngwaọrụ gị. E merụrụ emerụ? Tinye ya.
SPYWARE FREE / Eradication Apparatuses
Ngwa a na-esote na - enyocha gị kpuchie maka malware, na - emerụ ihe ọ bụla ọ nwere ike ịchọpụta.
A na-ewepụ ihe na-akpata malware kpamkpam na n'otu aka ahụ na-ewepụta ogbugba na rootkits, ikpuru, spyware, nje, na adware.
Ngwukota a na-akwanyere ùgwù na nke na-aga nke ọma nke na-amata ma kpochapụ scareware na malware sitere na PC gị.